Posted by တန်ခူး at 4:46 PM
Nickname ပေး၇တာ သဘောကျတယ် ကျနော်လည်း ဒါပေမယ့် အရင်က လင့်ထားတဲ့သူတွေက်ို Nickname တွေပဲပေးမိသေးတယ် နောက်မှ အားနာသွားလို့အဆောင်မှာတုန်းကတော့ သူငယ်ချင်းတွေကို မြို့ နာမည် သံဖြူဇရပ်၊ သထုံ၊ရေး အဲ့လိုပဲ ခေါ်မိကြတယ် ပျော်ဖို့ ကောင်းသား :)
အမရေ.. မြတ်နိုးကလဲ နစ်နိမ်း အများကြီးမှ အများကြီးရယ်..မှတ်မိသလောက် ၆ တန်းနှစ်ကတည်းက ရတာ .. တနှစ်၁ခုနှုန်း တခါတလေ ၂ခုနဲ့ ဟီး.. တက္ကသိုလ်ရောက်တော့လဲ နစ်နိမ်းနဲ့ အတော်နာမည် ကြီးခဲ့သား ကျော်ဟိန်းအတိုင်းပဲ လူတိုင်းက သိတယ် ကိုယ်ကတော့မသိ.. ဟီးဟီး.. ကျောင်းကို အမှတ်ပြန်ရစေတယ်.. အမရေ..
သူငယ်ချင်းတချို့ကပြောတယ် နစ်နိမ်းဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူးတဲ့ သူတို့များ ရချင်တာတောင်ရဘူးတဲ့.. ဟီး... ဆရာတွေက အစ အဲဒီနစ်နိမ်းများ ပြောလိုက်ရင် ပြုံးနေတာပဲ.. သူတို့လည်းခေါ်တယ်လေ.. လွမ်းလိုက်တာ .. အခုထိလည်း သူငယ်ချင်းတွေ ခေါ်ကြတုန်းပဲ.. ရန်ဖြစ်တဲ့ အခါ ပိုဆိုးတယ် ဟီး...
အော်ပြောတတ်လိုက်တာ။ Nickname အကြောင်း ဘာများထူးအုံးမလဲ ထူးအုံးမလဲနဲ့ ဖတ်နေတာ။ ဖတ်ကောင်းတုန်း ရပ်သွားတယ်။
လေနုအေးလေးနဲ့ ရေးသွားတော့ ဖတ်လို့ကောင်းပြီပေါ့။ အဲ.. Nickname တောင်ပါသွားပြီ။ :P
ဟုတ်တယ် တန်ခူးရေ.. တို့လည်း nickname ပေးရတာ ၀ါသနာပါတယ် အဟီး.. သူများကို နစ်နာစေတဲ့စိတ်မရှိတာ အမှန်ပါပဲ။ ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေဆို နာမည်ရင်းမသိတော့ဘူး.. မင်္ဂလာဆောင်ခါနီး ဖိတ်စာဖိတ်မယ်လုပ်တော့ သူ့နာမည်ရင်းလုံးဝ စဉ်းစားမရဘူး.. သူက ကျောင်းတုန်းက စာမရရင် ငိုလွန်းလို့ ပုလဲမျက်ရည်လို့ပေးထားတာ ။ ရှိသေးတယ် နွားကြီး၊ ဖားကြီး၊ ငုံးဥ (သူတို့က ငုံးခြံရှိတယ်)၊ ဘဲခေါင်း၊ ပဲကြော်၊ ခွေးချေးဆိုတာတောင်ပါလိုက်သေးတယ်.. ကျူရှင်အလာ တက်နင်းမိလို့လေ.. နာမည်ကိုတွင်ရော....
သူတို့နဲ့ပြန်တွေ့ရင် အခြေအနေလိုက်ပြီး စကားပြောရတယ်.. နို့မို့ဆို နာမည်ပြောင်ခေါ်မိရင် စိတ်ဆိုးမှာဆိုးလို့.. အားနာလာတာလည်း ပါတာပေါ့နော်.. အဟီး.. အခုထိ အဲဒီအကျင့်က ပါလာတုန်း။ ဂျပန်နာမည်တွေ မမှတ်မိတော့ နာမည်ပြောင်ပေးပြီး မှတ်ထားရတယ်.. :D
စကားမစပ်... Link ပေးထားတာ ကျေးဇူးပါနော်.. အခုတလော စာရေးပျင်းလို့ ဘာမှမရေးနိုင်သေးဘူး.. :P
အတန်းထဲမှာ အသား အလွန်မဲတဲ့ တစ်ယောက်ကို မဲကြီး...။ ဆံပင်ကို အုန်းဆီတွေ ရွှဲနေအောင် လိမ်းထားလေ့ရှိသူ တစ်ယောက်ကို ဆီရွှဲ...။
ဆံပင်ကို ထိပ်နား (ရှေ့ အစပ်နား) မှာ ပွနေအောင် ကောက်ထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို ထိပ်တင်ပွ...။ နာမည်ရင်းက ထွန်းမြင့် သို့ သော် အရပ်က အလွန်အမင်း ပုသောကြောင့် ထွန်းပု၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာ သူ့ ကို ၁၂ လက်မ တစ်ပေ၊ ၃ ပေ ကိုထွန်းမြင့် ဟုလဲ ခေါ်ကြ...။
ကောင်မလေး နှစ်ယောက်ကို တစ်ပြိုင်နက်ထဲ တွဲသောသူများကို နှစ်စီးတွဲ..။
ပါတိတ်ရှပ်များကို အမြဲတမ်း ၀တ်လေ့ရှိသော သူကို ပြိတ္တာ..။ တတန်းလုံးရဲ့Nick Name တွေ အကြောင်းပြောရရင်တော့ ကုန်နိုင်မယ် မထင်ပါ...။
ပျော်စရာ ပိုစ့်လေးတစ်ခု အတွက် ကျေးဇူးပါ တန်ခူးရေ...။
၉တန်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတယောက်။ ကျောင်းအပေါက်ဝမှာ လာလာရောင်းတဲ့ ၀က်ဆီဖတ်သည်နဲ့ ဖောက်သည်ဖြစ်နေတော့ သူမို့ ၀က်ဆီဖတ် သွားဝယ်ရင် ဈေးသည်က သာသာထိုးထိုးပေးတတ်တယ်။ ဆရာဆရာမတွေကအစ ၀က်ဆီဖတ်စားချင်ရင် သူ့ကို ၀ယ်ခိုင်းကြတယ်။ တရက်မှာ သချာင်္ဆရာမက အတန်းထဲကို ၀င်လာပြီး “ဟိုအကောင်...၀က်ဆီဖတ် ဘယ်သွားနေလဲ” လို့ မေးလိုက်ရာက သူ့နာမည်လည်း “၀က်ဆီဖတ်” အမည်တွင်သွားလေသတည်း။
စက်မှုတက္ကသိုလ်တက်နေတုန်းကတော့ “ဘဲကင်” တို့၊ “ပက်ပ်စီ” တို့ ၊ ငုံးဥ၊ ဘဲဥ၊ စာဥ စတဲ့ နာမည်တွေ ကြားဘူးတယ်။ “ကိုပေါ” နာမည်လည်း ကြားလိုက်မိသလိုဘဲ...ဟိ။
ဖတ်နေရင်းနဲ့ တန်ခူး nick name များ ပါလာမလား၊ ပါလာမလားနဲ့ ဖတ်လိုက်တာ ဆုံးသာဆုံးသွားတယ်၊ တန်ခူးရဲ့ နာမည်ပြောင်က ဘာလဲဆိုတာတောင် မသိရဘူး။ :D ကျနော့်နာမည်ပြောင်ကတော့ ပြောပြစရာ မလိုတော့ဘူးထင်တယ်နော်။ အသံခပ်ကျယ်ကျယ်နဲ့ အကောင်လေ။
ကွန်မန့်တခုရေးပြီးတော့မှ ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ နာမည်ပြောင်လေးက တော်တော် သဘောကျစရာကောင်းတာကို သတိရလို့ ထပ်ပြီး လေရှည်လိုက်ဦးမယ်။ :D
ကျနော်တို့ အထက်တန်း ကျောင်းသားဘ၀တုန်းက သူငယ်ချင်းတယောက်ကို နာမည်ပြောင် ပေးကြတာ `သကြားသီး´ တဲ့...။ ရုတ်တရက်နားထောင်လိုက်ရင်တော့ အသီးနာမည်လိုလို ဘာလိုလိုပေါ့။ အမှန်က မဟုတ်ဘူး။ သူ့အဖေက ရပ်ကွက်လူကြီး ဖြစ်ဖူးလို့ သူကြီးသား=သကြားသီး လို့ ခေါ်ကြတာ။ အဲဒီလို နာမည်ပြောင်တွေကျတော့ အသက်ဘယ်လောက်ကြီးကြီး ဘယ်လိုအချိန်ပဲ ပြန်ဆုံပြန်ဆုံ ခေါ်လို့ကောင်းတုန်းပဲ။
Nick name တွေအကြောင်းဖတ်သွားပါတယ် အစ်မရေ
dar so..sis's nick name would be...?
ဟုတ်တယ်မောင်မျိုးရေ… တို့ လဲ Nicknameတွေခေါ်ရတာ ပိုရင်းနှီးတယ်လို့ခံစားရတယ်….
မြတ်နိုးရေ… ချိုမြတဲ့ အတိတ်ကို သတိရစေတာလဲ အဲဒီNicknameလေးတွေပဲ မဟုတ်လား….
ဟုတ်ပါတယ်… ကိုတားမြစ်ထားသောရေ…ဒီpostကို ကျွန်မကိုယ်တိုင်လဲ မပြည့်စုံဘူးလို့ခံစားရတယ်… ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ကျွန်မကိုယ်တိုင် ပေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Nickname တွေကို တမင်ချန်ထားခဲ့ရလို့ ပါ….
နုရေ… Nicknameတွေပြန်တွေးကြည့်ရင် ပြူံးမိတာများတယ်နော်… တို့ လဲ နုလို ခဏခဏဖြစ်တယ်…
ဟိဟိ… ကျော့တို့ Nicknameတွေက ပျော်စရာနဲ့ ချစ်စရာနော်… ဆရာတောင် အလွတ်မပေးဘူး….
သက်ဝေ ပြောတဲ့ Nicknameတွေ ကြားဖူးသလိုလိုပဲ… သက်ဝေနဲ့ တို့ အတန်း သိပ်မကွာဘူး ဖြစ်ရမယ်… ဟုတ်တယ်ဟုတ်…
Nicknameကို အမြတ်တနိုးနဲ့ ယနေ့ တိုင်သုံးစွဲနေသူထဲမှာ ကိုပေါက ထိပ်ဆုံးကပေါ့….
ကိုစေးထူး(သို့ ) နဂျယ်ကောင်လေး ရေ… ကျွန်မရဲ့ Nicknameကို တမင်ချန်လှပ်ခဲ့တာပါ… ပြောပြလိုက်ရင် ကြေငြာစရာ မလို တန်ခူးဘယ်သူလဲ ဆိုတာ သိသွားမှာမိုလို့ ပါ… သကြားသီး..သူကြီးသား…တချို့ Nicknameက အဲလို နဲနဲစဉ်းစားမှ ရတယ်နော်…
ဒါလေးတခုတော့ ချမ်းသာပေးပါdiLoရယ်… ကျန်တာတွေ အကုန်ပြောပြမယ်နော်….
So pleased to read this one.
I think both of us batch may be near also.
I known these nick names including Ko Paw.
I am the one received nick name as "......" (like as yearly called .....)
အဟီးးးး ရထားသမျှ နာမည်ပြောင်တွေ ချရေး ရရင် A4 တစ်မျက်နှာ ပြည့်သွား မလားပဲ.. ပုံပန်း သဏ္ဍာန်ကို အစွဲပြုပြီး ရတဲ့ နာမည်ရယ် အမူအကျင့်ကြောင့် ရတဲ့ နာမည်ရယ် ပြီးတော့ ဟဲဟဲ... ပြောရင်း ဆိုရင်း များကုန်ပြီ။
SZM ရေ… ဖြစ်နိုင်ပါတယ်… Nickname ကိုသဘောပေါက်သွားပြီ… ခုလိုလာလည်တာ ကျေးဇူးပါ… နောင်လဲ လာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်…
လှိုင်ရေ… အဲလောက်တောင် အများကြီးရထားတယ်ဆိုတော့ အရမ်းနာမည်ကြီးလို့ဖြစ်ရမယ်…ဟုတ်?
အမ ဒီပို့စ် ကို ခုမှ ဖတ်မိတယ်။ အမရေးဖူးတာ မသိပဲ ကျွန်မကို တက်ထားတဲ့အတိုင်း စက်တင်ဘာလတုန်းက Nickname ဆိုပြီး ပို့စ်ရေးထားမိတယ်...တိုက်ဆိုင်သွားတာကို comment ရေးခဲ့တယ်နော် အမ။